Izany dia fotoana fahiny mifototra slots tombony foana izay mandresy lalao. Tsy manana reels dimy sy folo raikitra paylines. The lalao ho ambony ny resahana any an-tsaha eo ambanin'ny lanitra voasary. Ny lalao dia fanomezam-boninahitra ny olo-malaza Vikings ary ahitana ny marika mifototra amin'ny azy ireo. Misy fototra feon'ny milina Gears nihodidina nandritra ny spins. Misy ambaratonga enina antsoina hoe toy ny Valhalla spins fa afaka misafidy avy. Tsirairay ireo ambaratonga isan-karazany manome maimaim-poana miaraka multipliers spins niteraka iray tombony mariky. Ny haavon'ny hilokana manomboka amin'ny 0.10 £ fotsiny sy miakatra goavana £ 2000 isan-spins. Noho izany, ity lalao ity mety tsara ho an'ny mpilalao amin'ny hafa karazana teti-bola.
Momba ny developer ny Valhalla
Ny tena tsara developer ity slots tombony foana izay mandresy lalao dia Betdigital (NYX). Amin'ny traikefa nandritra ny taona maro sy ny fahaizany manokana amin'ny teknolojia maoderina lalao, dia manolotra ny farany traikefa amin'ny lalao Casino mpampiasa aterineto.
Ny fanehoana an'ohatra io slots tombony foana izay mandresy lalao dia Viking fiarovan-doha, namely tandroka, miaro amin'ny mpivady ny famaky sy ny sambo. Misy ny sasany Viking fomba fanehoana an'ohatra ny mitendry karatra avy 10 ny A. Ireo no kely karama ny sary famantarana ny lalao izay tena matetika miseho eo amin'ny reels. Ny marika ambony mandoa ny sambo nitondra miaramila Vikings izay vola 2500 vola madinika dimy amin'ny karazany. Tsy misy afa-tsy iray mariky tombony amin'ity lalao ary izany dia mariky ny vehivavy tsara tarehy Viking.
Wild Feature: Ny vehivavy Vikings dia ny bibidia endri-javatra io slots tombony foana izay mandresy lalao. Ny famantarana dia fanoloana ny sisa amin'ny lalao fanehoana an'ohatra. Raha eo amin'ny laharana dimy miseho, ianao dia nomena ny lalao payout mariky ny ambony izay 2500 coins.
Free Spins Levels: Misy ambaratonga enina araka ny voalaza tany aloha, ary dia manatitra tombontsoa isan-karazany. Amin'ny voalohany, ambaratonga, dia ny toerana misy anao, ny bibidia miseho eo amin'ny afovoany miraingiraingy azon'ny. Ny ambaratonga faharoa dia manolotra ny fanitarana an'ala izay mandrakotra miraingiraingy azon'ny manontolo miaraka amin'ny hetsiky 2x. Ny ambaratonga fahatelo manome 4x hetsiky amin'ny fanitarana bibidia sy ny respins. Next ka dia 6x, 8ary ny 10x X multipliers roa, telo sy efa-respins. Ny haavon'ny avy faharoa ny alalan 'ny fahadimy dia fanitarana ny fivoaky ny marika.
Miaraka amin'ny foto-kevitra mifototra amin'ny tsy fahita firy Vikings, izany slots tombony foana izay mandresy no tsara indrindra mpanakanto. Ny safidy ny fifidianana avy amin'ny ambaratonga enina samihafa dia Added tombontsoa.